Postano 2.5: Kuwedzera Kugadzira uye Kugadziridza Kune Yemagariro Ratidziro Kuona | Martech Zone
Postano 2.5: Kuwedzera Kugadzira uye Kugadziridza Kune Yemagariro Ratidziro Kuona
Muvhuro, July 21, 2014 Muvhuro, July 21, 2014 Douglas Karr
Isu takanyora nezve izvo zvinoshamisa social media command nzvimbo nenzvimbo dzekuratidzira inofambiswa naPostano, anotsigira saiti ino. Postano ndiyo chikuva chatinoshandisa kudzikamisa bhata redu rinoratidza zvinongedzo zvekutaurwa kwevatsigiri vedu munhau dzemagariro. Postano yakaenderera mberi nekuvandudza yayo zvinoonekwa zvekushambadzira zvinopihwa mukuburitswa kwavo kutsva, nekukurumidza kuve inotungamira chikuva chekuratidzira mushandisi akagadzira zvemukati yemitambo, fashoni, zvigadzirwa zvevatengi zvigadzirwa, varaidzo, kufamba, uye kushambadzira uye chiitiko cheweti verticals.
LA LA Kings yakashandisa iyo Photo mosaic visualization, yakaumbwa neye fan fan yakamakwa #WeAreAllKings, pane yavo peji rekutanga mushure mekuhwina Stanley Cup.
Iyo Postano vhezheni 2.5 kuburitswa inosanganisira epamberi magariro mafirita esarudzo, iyo Sita Edhita yeyakajairwa visualizations, nyowani ine simba data visualizations, uye zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa. Pamwe chete izvi zvinowedzerwa zvinoumba yakasimba yepuratifomu yemhando kuti uwane mafeni avo, uye nekukurumidza curate uye kutsikisa akanakisa fan fan zvese zvese kubva kune rimwe dhibhodhi.
Kubatanidza zvemagariro kubva pamishandirapamwe kuenda kunzvimbo dzakadai sezviitiko, zvitoro zvekutengesa, nhandare, uye nzvimbo dzekuchengetedza vanhu kuri kushandura kuti mabrands anoziva sei mafeni avo makuru uye kumutsa vatengi vavo. Nokuburitswa uku, isu takapa vatengi vedu zvishandiso zvine simba kwazvo kuti vabatsire kusunungura kugona kwavo. Vatengi vedu vari kutsvaga kutora yavo yemagariro kuratidza visualizations kune inotevera nhanho, uye neaya akakosha maficha maficha, ivo vanogona nehunyanzvi uye nekufungidzira kudaro, uye zvechokwadi vanogadzira imwe-ye-ye-mhando zviitiko. Justin Garrity, SVP, Postano
Style mupepeti - Iyo seti ye-on-screen maturusi, iyo inobvumidza mabhenji kuti agadzire tsika yemagariro visualizations nekwanisi yekushandura mafonti, mavara, uye sarudza kubva kune seti yematemplate anokwezva. Iyo Dhizaina Edhisheni inosanganisira CSS mupepeti kupa mawebhu dhizaini zvisati zvamboitika kutonga pamusoro pechitarisiko uye nekunzwa kwemaonero avo. Iyo Dhizaina Edhita zvakare inosanganisira kugona kuwedzera mifananidzo uye kuisa anotsigira zvemukati seyakasiyana maonero mukati meratidziro.
Smart Hova - Ipa akawanda mafirita ekudzora ekuisanganisira uye kusabvisa zvinotaurwa, ma hashtag, uye mamwe mazwi akakosha. Smart Streams inobvumira mabhenji kuti agadzirise zvirimo munzira kwayo chaiyo yekuvandudza maitiro e curation uye UGC sarudzo. Aya maPostano Platform maturusi anobatsira mabrandari kuratidza hunhu hwavo hwakasarudzika kune vateereri vakakosha, uye kuita kuti kutaurira iyo nyaya kuburikidza nekuratidzira kwenzvimbo kuve nyore.
Simba idzva data visualizations - Mutsva wemifananidzo mosaic visualization (inoratidzwa pazasi), yemuno browser caching yekudzivirira internet disconnects kubva mukukanganisa kuratidzwa, zviri nyore zvemagariro ekuongorora masangano kugona, nekukurumidza kukurumidza.
Iyo Smart Streams interface inobvumidza zvigadzirwa kuti zvigadzire zvakaenzanirana hova zvem fan fan yakasvinwa kune yavo chaiyo yemagariro mushambadziro inoda.
Iyo Dhizaina Edhita inopa mabhureki kutonga kwakazara kuti vagadzire uye vagadzirise magariro ekuratidzira ekuratidzira.
Postano inguva-chaiyo, inoona yekutengesa chikuva iyo inowana uye inochengetedza yakanakisa yemagariro fan fan uye inoburitsa izvo zvemukati sekushamisa visualizations pawebhu rese, nhare uye mhenyu skrini yekuratidzira kwemaindasitiri senge mitambo, zvekutengesa, zviitiko uye kupfuura. Postano yakabatana nezvakakura zvigadzirwa kugadzira chikuva chemamaki uye mafeni kuti vataure nyaya dzavo pamwechete. Vatengi vePostano vanosanganisira BCBG, CFDA, Evernote, Google, LA Kings, Oregon Ducks, YOOX, nevamwe vazhinji.
Tags: hashtag yekutsvagapostanokuona munharaundamushandisi akagadzira zvemukatikuratidzwa kwekuona
Jul 21, 2014 pa 8: 33 AM
Ichi chinhu here chevamabloggi ezuva nezuva seni? Zvinondiyeuchidza zvishoma nezveRebelmouse.
Jul 21, 2014 na2: 04 PM
Hazvigone kuti Gavin - Postano anonyanya kugadzirisa mumakambani ane zvigadzirwa zvekuratidzira, senge nzvimbo dzekutengesa, makambani, zviitiko nemisangano, uye nhandare dzemitambo!